Momba anay - Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd.
Suzhou Jiarui Machinery Co., Ltd. dia famolavolana, fampandrosoana, famokarana, varotra napetraka ho iray amin'ireo mpanamboatra milina plastika matihanina. Any amin'ireo tanàna misongadina ankehitriny, ny telozoro, fantatra amin'ny anarana hoe tanindrazan'ny masinina plastika ao China, zhangjiagang. Ny toerana ara-jeografika dia ambony, na amin'ny varotra na amin'ny fiaraha-miasa dia tena mety.
Fitaovana fanodinana plastika sy fitaovana fampitaovana extrusion an'ny orinasako dia manana traikefa fanamboarana 20 taona, nampivondrona ekipa matihanina sy ara-teknika, manana fitaovana milina tonga lafatra sy fitaovana fanohana, matotra tokoa ny fizotry ny famokarana. Amin'izao fotoana izao ny vokatra lehibe dia ny milina mavesatra, ny crusher ho an'ny fitoeran-tsakafo, ny fonosana barika iray barika, ny milina fanodinam-bolo tokana / roa, ny milina fanodinana horonantsary tokana / indroa, milina fanodinana fantsom-boaloboka voatokana, tsipika fanodinana PET, tsipika fanadiovana sary mihetsika PE / PP , masinina sy ny fitaovany mpanampy, tsipika fanalana plastika sy vokatra hafa. Mandritra izany fotoana izany dia afaka manome manokana arakaraka ny takian'ny mpanjifa sy ny fitaovana fanodinana simika misaraka.
Ny fampandrosoana ny orinasa dia nifikitra tamin'ny kalitao voalohany, ny filozofia voalohany, mamorona tsy tapaka ny teknolojia famokarana sy ny fizotran'ny famokarana; Ny fikatsahantsika ny hatsarana, ary manatsara ny herin'izy ireo tsy tapaka; Manatsara hatrany izahay hanomezana ny mpanjifa drafitra fanodinana plastika feno sy mahomby kokoa sy ny tetikady fandroahana extrusion.
Amin'ny fampidirana an'izao tontolo izao ankehitriny, ny firenena rehetra dia hanana fifanakalozana lalindalina kokoa. Amin'ny maha orinasa sinoa anay dia hotazominay ny fiheverana tsara kokoa ny "vita sinoa" hanompoana ny mpanjifa manerantany.
Izahay koa dia hanolo-tena amin'ny famokarana sy fanodinana vokatra plastika, hitondra fitaovana mahomby sy mitsitsy angovo ary hanao ny anjaranay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana manerantany. Niady mafy izahay tamin'ny finoana fa afaka manavao ny haitao haingana kokoa izahay, mamokatra vokatra amin'ny fomba mahomby kokoa ary manamboatra indray ny plastika maloto kokoa amin'ny tontolo iainana.